August 8, 2019 - Page3of3- ThutaSone
အားလုံးသတိရှိကြပါ…..မန္တလေးမြို့မှာ ဒီလို​တွေ လုပ်​​နေကြပြီတဲ့.
အားလုံးသတိရှိကြပါ…..မန္တလေးမြို့မှာ ဒီလို​တွေ လုပ်​​နေကြပြီတဲ့. အဲဒီလို​တွေ လုပ်​​နေကြပြီတဲ့…..စိုးမိုးကြည်​ 96MT MDY က​ ​ပြောပြပါတယ်​….. မိတ်ဆွေ ဒီနေ့ နံက် ၂ နာရီခွဲ အချိန်က အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခု …..ကျတော်အိမ် အမရပူရ ကွက်သစ်မှာဖြစ်သွားတာပါ …..မိတ်ဆွေတွေသတိထားရအောင် မျှဝေကြပါ…. မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ အိမ်ရှေ့ခြံတစ်ခါးကို ဇွတ်ဖွင့်ခိုင်လိမ့်မယ် …..သူဒုက္ခ […]
ကဝက်ရ ွာ လက်ရှိတောဆေးခန်းလေးကို တိုက်သစ်လေးဆောက််ပေးခဲ့တဲ့ မိုးဇလ ပညာရှင်် ဒေါက်တာထွန်းလွင်
ကဝက်ရ ွာ လက်ရှိတောဆေးခန်းလေးကို တိုက်သစ်လေးဆောက််ပေးခဲ့တဲ့ မိုးဇလ ပညာရှင်် ဒေါက်တာထွန်းလွင် ကဝက်ရွာ တဲဲပုတ် မှ စံကိုက်ဆေးခန်းလေးဆီသို့ ၇-၈-၂၀၁၉ နံံနက်(၅း၃၅)နာရီ မိိတ်ဆွေများရဲ့ စုပေါင်းထည့်ဝင်အလှူငေ ွနဲ့ မြောင်းမြခရိုင်၊ ကဝက်ရ ွာ လက်ရှိ တဲပုတ်ဆေးခန်းလေးကို အလှူငေွသိန်း(၁၆၀) နဲ့ […]